रणनीतिहरु टिप्पणी गर्नुहोस्: गर्नुहोस् र नगर्नुहोस् | Martech Zone
रणनीतिहरु टिप्पणी गर्नुहोस्: गर्नुहोस् र नगर्नुहोस्
सोमवार, जुलाई 29, 2013 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
जब मैले पहिलो पटक ब्लगि started शुरू गरेको थिएँ, मलाई लाग्छ कि म आफैंले आफ्नै साइटमा लेखेको हरेक पोस्टको लागि अन्य साइटहरूमा १० पोष्टहरूमा टिप्पणीहरू थपिरहेको थिएँ र सम्भवतः मैले लेखेको थिएँ। त्यस समयमा ब्लगमा कुराकानीहरू अद्भुत थिए ... तिनीहरू दर्जनौं पृष्ठहरूका लागि जान सक्दछन्। टिप्पणीहरू तपाईंको ब्लगलाई अख्तियारकर्ताहरूद्वारा देखिएको (अझै पनि छ) र ट्राफिक तपाईंको आफ्नै साइटमा फर्काउनुको शानदार साधन थियो।
यो केवल मेरो विचार हो, तर म विश्वास गर्दछु कि फेसबुकले अधिकांश अंश टिप्पणी गर्ने ब्लगलाई मार्छ। हाम्रो ब्लग पोष्टको छेउमा छलफल गर्नुको सट्टा, हामी फेसबुकमा हाम्रो पोष्टहरू साझा गर्छौं र त्यहाँ कुराकानी गर्छौं। मैले आफ्नो टिप्पणी प्रणालीलाई फेसबुकमा लैजानको लागि सोचेको छु, तर म आफैंमा अरु गतिविधिहरू सार्नको लागि आफूलाई ल्याउन सक्दिन पर्खाल बगैचा.
नतिजाको रूपमा, टिप्पणी गर्दै यो के भइरहेको थिएन। टिप्पणीहरू प्राय: ब्लगमा थोरै दुर्लभ हुन् र टिप्पणी स्प्यामरहरू द्वारा धेरै हदसम्म दुरुपयोग गरिएको छ। त्यसोभए प्रश्न सोध्नु पर्ने हुन्छ, “के हामीले अझै हाम्रो ब्ल्गमा टिप्पणी रणनीति समावेश गर्नु पर्छ?"।
हो ... तर यहाँ मेरो टिप्पणी रणनीतिहरू कसरी परिवर्तन भएको छः
जब म असहमत हुन्छु वा कुराकानीमा थप्न केही पर्याप्त हुन्छ, म सधैँ लेखकको पोष्टमा टिप्पणी गर्नुहोस् र त्यसपछि मेरो सामाजिक नेटवर्कका व्यक्तिहरूलाई कुराकानी गर्न कोशिस गर्न र उत्प्रेरित गर्न त्यहाँ इशारा गर्नुहोस्।
मँ अझै पनी विश्वास गर्दछु कि म सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहेको साइटहरूमा टिप्पणी गर्नु एक योग्य कारण हो। जबकि म सँधै जवाफ प्राप्त गर्न सक्दिन, बारम्बार कुराकानीमा मान थप गर्दै अन्तत: लेखकबाट ध्यान आउँछ। अर्को शब्दमा, तिनीहरू म को हुँ भनेर जान्दछन्।
I URL हरू प्रकाशित नगर्नुहोस् मैले पोस्ट गरेको टिप्पणीहरूमा। धेरै टिप्पणी गर्ने प्याकेजहरूले तपाइँको नामलाई तपाइँको साइट, तपाइँको ब्लग, वा तपाइँको साइटमा लिंकको साथ प्रोफाइलमा लिंक गर्दछ। टिप्पणी स्प्यामरहरू प्राय: तिनीहरूको सामग्रीमा लिंकहरू धक्का दिन्छ। म तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा स्प्यामरको रूपमा रिपोर्ट गर्दछु (अकिस्मेटमा), कालोसूचीमा (Disqus मा) र स्प्याम टिप्पणीहरू मेटाउनुहोस्।
म अब एक दिन १० साइटहरू पछाडि जान सक्दिन, तर म अझै टिप्पणी गर्दछु प्रत्येक हप्ता केहि पोष्टहरू। अधिकतर समय, ती टिप्पणीहरू ब्लगहरूमा गरिन्छ जहाँ म साथी हुँ, साथी बन्ने आशा गर्छु, वा ब्लगरको सम्मान गर्दछु। धेरै पटक, यो नयाँ ब्लग हो।
म सँधै पोष्टहरूमा टिप्पणी गर्न प्रयास गर्दछु मेरो उल्लेख गर वा हाम्रो सामग्री।
एक SEO दृष्टिकोणबाट, टिप्पणीहरू मद्दत गर्छन्? मँ विश्वास गर्दछु कि मेरो आफ्नै ब्लगमा टिप्पणीहरू सामग्री, अनुक्रमणिका र पोष्टको क्रमबद्धमा थप्दछन्। म विश्वास गर्दिन कि यो संयोग हो कि मेरो पोष्टहरू धेरै सामग्रीसँग मिल्दछ। के अन्य ब्लगमा तपाइँको टिप्पणीहरूले तपाइँको SEO लाई मद्दत गर्दछ? सम्भव छैन ... धेरै टिप्पणी प्रणाली प्रयोग nofollow वा ब्लक लिंक जुन तपाइँ प्रकाशित गर्नुहुन्छ। मँ मेरो टिप्पणी राज्य बाट एसईओ को लाभ को उम्मीद छैन।
टैग: टिप्पणीरणनीतिहरु टिप्पणी गर्नुहोस्टिप्पणी कमेन्ट रणनीतिहरुटिप्पणीपर्खाल बगैचा
डेभिड डब्ल्यू। ग्रिग्स्बी
चाखलाग्दो, यस्तो देखिन्छ कि एक रिभर्स कमेन्ट अनुप्रयोग कनेक्टर टिप्पणीहरूको अगाडि तान्नको लागि क्रममा छ ...।
त्यहाँ प्लगइनहरू छन् जुन WP र फेसबुक टिप्पणीहरू सिंक गर्दछ। म व्यक्तिगत रूपमा मात्र फेसबुकमा कुराकानीहरू सबै समयमा धक्का मनपर्दैन। मैले डिस्क ट्याकमा ट्याब गरिएको टिप्पणीहरू एउटा डिस्कको साथ अर्को फेसबुकमा अर्कोको बारेमा सोचेको छु ... तर त्यसपछि Google+ अर्को हुन्छ, कहिले समाप्त हुन्छ भनेर निश्चित छैन।
डग, के तपाईंले टिप्पणी पोस्ट गर्ने र संवाद सिर्जनामा ​​तपाईंको साइटमा फर्कने मानिसहरूलाई बढ्नमा मद्दत गर्नुहुन्छ? म उत्सुक छु कि मेरो केहि मनपर्ने ब्लगहरू / पोडकास्टहरू, जुन धेरै लोकप्रिय छन्, यदि बहसको शुरूआत गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ, किन कि उनीहरू यति धेरै ट्राफिक पाउँछन्। म निश्चित छु कि यसलाई राम्रोसँग सोच्न आवश्यक पर्दछ र समय लिइरहेको हुन सक्छ, तथापि, पोइन्टले केही ध्यान दिन र कुनै पनि दर्शकहरूको बीचमा चासो जगाउने छ। 🙂
यो गाह्रो छ, @ ब्राजीलियन जीवनशैली: डिस्कस! म आज कल भन्दा टिप्पणीहरु मा धेरै अधिक कुराकानी र कुराकानी देख्न को लागी। सायद यो किनभने ब्लगिंग यति धेरै प्रचलित छ। मलाई लाग्छ कुराकानीहरू फेसबुक र Google+ मा साइटहरूमा आफैं भन्दा बढी भइरहेको छ।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०24 बिहान
यदि विचार गर्दै, साइट आफैमा विशेष गरी परिस्थिति त आफैले सोचेमा तपाई सही हुन सक्नुहुन्छ। धेरै ब्लगि & र टिप्पणी गर्ने विषय हातमा छन् र स the्लग्नता दर्शकहरूले वास्तवमा साइटमा लिन्छन्। यदि हामीले विचार गर्‍यौं कि व्यक्तिहरू तत्काल माध्यमको साथ लिंकहरू पछाडि फर्काउन कोशिस गर्दैछौं, तब पक्कै पनि पोष्ट गर्नु भनेको डाइटमा हो। जहाँसम्म, म पक्का छु कि हामीले त्यसपछि अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ, जहाँ त्यो स्थानको महत्व छ। ह्वाइट-टोपी एसईओ अझै राजा हुनुहुन्छ, यदि तपाईं यस खेलमा दीर्घायुमा सान्दर्भिक केहि लागि हुनुहुन्छ भने। कुनै मध्यस्थता छैन कि तपाइँ एक साम्राज्य निर्माण हुनेछ!
जे होस् मँ अझै पक्कै छक्क परे कति टिप्पणीहरु स्प्यामरहरु त्यहाँ जारी छ! 🙂
मलाई लाग्छ स्पामिंग तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईं कमेन्टरका टिप्पणीहरू र सायद उनीहरूको केही कथाहरू वा किस्सेहरू स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईं मूल पोस्टर हुनुहुन्न भने, यहाँ महिमाको दुईधारे तरवार छ। तपाई पोष्टर वा ब्ल्गर, साइटको मालिक आदिको लागि मात्र यातायात निर्माण गर्दै हुनुहुन्न, तर तपाई सामूहिक रूपमा सम्भव क्लिक थ्रोको लागि आफैंमा ध्यान आकर्षित गर्दै हुनुहुन्छ!
मैले यस विचारलाई श्रोतबाट प्राप्त गरें, र अहिले बिहान सम्म यसको परीक्षण गर्न बाँकी छ। इमान्दार हुन यो वास्तवमा यति हानिकारक देखिदैन यदि तपाईंको प्रतिक्रियाहरू राम्रोसँग भए पनि कमेमेन्टर र ब्लग पोष्ट दुबैको अत्यधिक सम्मानका रूपमा छन् भने; सबैलाई लि juice्क जुस।
यो निश्चित छ कि याहू मा मूर्ख प्रश्नहरूको जवाफ दिएर र फिर्ता लिंक को खातिर लिंक फिर्ता निर्माण गर्न को लागी को लागी नरक कुट्छ। अधिक ब्लगिंग म अधिक गर्न को लागी म सहज संग लेख्न को लागी सक्षम छ र कम प्रयास संग छिटो टाइप :)। म अबदेखि प्रयास गर्न र बिल्डिंग छलफल सुरू गर्न लागिरहेको छु! 🙂
इमान्दारीताका साथ आजकल मँ कोही कसैले हाम्रो लेखहरु साझा गरेर उनीहरु लाई मान्यता दिँदछ - जब यो हाम्रो सामग्री लेख्ने कुरा आउँछ तब यो परम प्रशंसा हो। हामी कुराकानीको लागि अतिरिक्त र provide्ग प्रदान गर्न टिप्पणीहरू मन पराउछौं, तर एउटा नोट मात्र "महान् लेख" ले मलाई अधिक काम गर्दैन। 🙂
डग्लस तपाईं बिल्कुल ठीक हुनुहुन्छ, लेख साझेदारी गर्दै, निस्सन्देह उत्तम माध्यम हो! त्योले भन्यो, मलाई खुशी लाग्नेछ, यदि तपाईंसँग ठीक छ भने, तपाईंको साइट मेरो भविष्यको ब्लग पोष्टहरूको लागि सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्! तपाईंले स्पष्ट रूपमा आफ्नो ब्लगमा धेरै प्रयास गरिसक्नु भएको छ, किनकि तपाईं जवाफमा तुरुन्तै अट्टेरी हुनुहुन्छ!
हास्यास्पद कुरा यो पनि हो, यी छलफलहरू कहिलेकाँही उनीहरू आफैंको मासुको कारण ब्लग पोष्ट हुन सक्छ।
ग्राहक सेवा संख्या
नोभेम्बर,, २०१ at 25::2014 बिहान
ब्लग टिप्पणी को बारे मा राम्रो ज्ञान साझा को लागी धन्यवाद
म फेसबुकमा कुराकानीहरू सबै पटक धकेल्न मन पराउँदिन। मैले डिस्क ट्याक गरीएको ट्याब टिप्पणीको बारेमा विचार गरें डिस्ककोमा र अर्को फेसबुकमा अर्को… तर त्यसो त गुगल + अर्को हुन्छ, कहिले निश्चित हुन्छ।